चिसो मौसम मा इन्जिन सुरु गर्दै। चिसो मौसममा इंजेक्शन इन्जिन चलिरहेको
धेरै मोटर चालकहरुलाई यो अवधिमा सवारी किनकी, ग्यारेज सबै हिउँदमा आफ्नो कार छोड्न - यो मात्र हो, खतरनाक, तर पनि चालक को एक निश्चित कौशल आवश्यक छ। बरफ वा कालो बरफ सबैभन्दा सार्वजनिक परिवहन वा ट्याक्सी मा जान्छ। तर अझै पनि आफ्नै कार मा काम गर्न जाने निर्णय गर्नेहरूलाई, चिसो मौसम मा इन्जिन सुरु को समस्या सामना गर्न सकिन्छ।
चालु इंजेक्शन इन्जिन चिसो मौसममा
अधिकांश मा इंजेक्शन कार तल -20 डिग्री सेल्सियस एक तापमान मा सुरु छैन। कारण आम हुन सक्छ, तर तिनीहरूलाई को थोक - पुरानो इलेक्ट्रोनिक नियन्त्रण एकाइ फर्मवेयर छ। यो केवल खाडी नयाँ फर्मवेयर गर्न सक्छन् छुटकारा प्राप्त गर्नुहोस्। तर सम्बोधन गर्न आवश्यक थुप्रै अन्य मुद्दाहरू छन्। यी मध्ये एक जहाँ त्यहाँ एक मिसिन छ कोठा, मा ताप को कमी छ। यो ब्याट्री असफल भन्ने तथ्यलाई तिर जान्छ।
ब्याट्रि peremerzaet भने, साथै थप शुल्क चलाउन इन्जिन सामान्य तापमान मा भन्दा यस वर्षको चिसो समय आवश्यक छ, यो ठीक छ यो एक प्रमुख समस्या हुन्छ, त्यो त discharged छ। त्यहाँ धेरै तरिकाहरू छन्। पहिलो, मात्रै थप वा कम गर्मी ब्याट्री भण्डारण गर्नुहोस्। दोस्रो, सीमा गर्न ब्याट्री चार्ज छैन। यो इलेक्ट्रोलाइट को घनत्व परिवर्तन र चिसो हुनुको, यो यसको गुण हराउछ, र शुल्क खस्छ भन्ने तथ्यलाई कारण छ।
केही थप प्रभावकारी तरिकामा
यो चिसो मौसम मा इन्जिन को सुरूवात पनि pusher संग गर्न सकिन्छ भन्ने तथ्यलाई ध्यान लायक छ, तर यो एक मार्गदर्शन प्रसारण गर्न आउँछ। त्यहाँ ब्याट्री न्यानो अर्को तरिका हो। यसो गर्न, तपाईं 1-2 मिनेट को लागि बाहिरी प्रकाश मा गर्न सक्नुहुन्छ, र त्यसपछि कार सुरु गर्न प्रयास गर्नुहोस्।
तर यो असम्भव छ त्यसैले सफल भने, तपाईं हुड खोल्न र केही manipulations पहिले नै छन् खर्च छ। उदाहरणका लागि, यो कहिलेकाहीं साथै मद्दत गर्छ कि, स्पार्क प्लग प्रतिस्थापन रूपमा सिलिन्डरहरु हटाउन गर्न सम्भव छ। यो आवश्यकता बिना पहिलो पटक चिसो मा इन्जिन को इंजेक्शन को सुरु ग्याँस पेडल गर्न भनेर टिप्पण लायक छ। भने, त्यसपछि सिलेंडर पर्ज पछि पेडल सुरु गर्न प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ।
एक दमा (दमा) बारे बिर्सनु हुँदैन। के तपाईं तिर यो पुल भने, यो समस्या सामना गर्न धेरै सजिलो हुनेछ। कुनै पनि मामला मा, तपाईं जाडो लागि ग्यारेज मा कार छोड्न अघि, स्पार्क स्रोत, प्रणाली सुरु, gaskets, तेल जाँच गर्नुहोस्। को जाडो लागि इन्जिन तेल लागि, यो तल छलफल गरिनेछ रूपमा, एउटा फरक कथा छ।
चालु कार्बोरेटर इन्जिन चिसो मौसममा
पेट्रोल कार लागि जाँदा र यहाँ त्यहाँ हिउँदमा समस्या हो। विशेष कार को आन्तरिक प्रणाली गर्न अक्सर यो समस्या। धेरै गम्भीर frosts मा कार पहिलो पटक र सबै सामान्य सुरु गर्न नसक्नुको। अक्सर सम्पर्क ज्वलन र नियन्त्रण स्थापना समस्या हल। तर भूमिका खेल्न र सुरु-अप पनि हुन पूर्व-कन्फिगर पर्छ जो प्रणाली, को लागि।
निस्सन्देह, चिसो मौसम मा इन्जिन को स्टार्टर serviceable छ मामला मा धेरै सजिलो हुनेछ सुरु गर्न। यो संयन्त्र आवश्यक भन्दा धेरै बढी उर्जा खपत गर्न सक्छ, र उत्पादन कार सुरु गर्न पर्याप्त भोल्टेज प्रदान गर्दैन। यो सम्भव र आवश्यक छ सामना गर्न। यो एक नयाँ किन्न वा पुनर्निमाण गर्नु वा पुरानो स्टार्टर निर्माण गर्न लायक छ।
यो समस्या समाधान गर्न मद्दत गर्न अर्को सिद्ध तरिका एक अधिक शक्तिशाली ब्याट्री स्थापना गर्न छ। 55 आह ब्याट्री मा स्थापित एक 60 आह लागि डिजाइन गरिएको छ कि एक परिवर्तन गर्न सकिन्छ। माथि उल्लेख रूपमा, ब्याट्रि चार्ज औसत भन्दा माथि हुनुपर्छ, तर अधिकतम, यो चिसो मौसम मा इन्जिन सुरु लागि इष्टतम छ।
कसरी सफलतापूर्वक -20 मा इन्जिन, वा इन्जिन तेल को विकल्प सुरु गर्न
हामी कार्बोरेटर र इंजेक्शन इन्जिन को सुरूवात मा निर्णय गरेपछि, यसलाई लायक इन्जिन तेल, जो लगभग एक प्रमुख भूमिका खेलेका छ बारे भन्न केही शब्दहरू छ। अहिले निम्न तेल उपलब्ध:
semisynthetic (खनिज र कृत्रिम)।
खनिज 90 औं आन्तरिक दहन इन्जिन मोडेल वर्षको लागि प्रयोग तेल। फलस्वरूप, शिल्प VAZ प्रयोग खनिज तेल। तर त्यहाँ एउटा छ "तर।" तेल यस प्रकारको कम तापमान मा thicken र चिसो मौसम मा इन्जिन सुरु गर्न अनुमति छैन भन्ने तथ्यलाई। VAZ अर्द्ध-सिंथेटिक्स सहन्छ, त्यसैले यसलाई जाडो अवधिको लागि उपयुक्त छ। को 2101-2107 मोडेल अक्सर किनभने गलत कन्फिगरेसन ज्वलन को बनाउन गाह्रो हो कि भूल छैन।
कृत्रिम तेल आदर, तिनीहरूले विभिन्न additives को ठूलो मात्रा समावेश, र पनि -40 डिग्री सेल्सियस तल तापमान मा thicken, त्यसैले यो जाडो अवधिको लागि आदर्श छ।
के कम गुणस्तर इन्धन प्रयोग संग fraught छ
ईंन्धन प्रणाली कार को कार को ब्रान्ड र यसको सञ्चालनको अवधि बिना पनि इन्धन ट्यांक भरिएको गुणस्तरीय हुनुपर्छ पेट्रोल वा डिजेल, एकदम जटिल छ, तर। जब हिउँदमा इन्जिन सुरु लागि चिसो समस्या, तपाईं पहिलो कि इन्धन पानी संग पतला छैन निश्चित गर्न आवश्यक छ। आखिर, यदि यो यति छ, चिसो condensate र पानी स्थिर हुनेछ, यो कार को प्रणाली disrupts र यसलाई सुरु गर्न गाह्रो बनाउँछ।
यो समस्या मात्र उचित समाधान पानी condensate साथ सँगै ढल्छ कहाँ यो कार ड्राइव दूर एक गरम ठाउँमा आवश्यक छ भन्ने तथ्यलाई मा निहित। तर यो पेट्रोल मा कहीं जान सिफारिस गरिएको छैन। त्यहाँ पनि इन्धन, शुद्ध पेट्रोल मा चलान कार गर्न बाँकी पानी निकाल्न गर्न अनुमति Dehumidifiers छन्। तर यो तपाईं चिसो मा आफ्नो कार सुरु गर्न अनुमति दिन्छ कि एक अस्थायी समाधान मात्र हो।
डीजल इन्जिन को सुरूवात समस्या समाधान
जो यो डिजेल इन्जिन सुरु गर्न असम्भव छ किनभने त्यहाँ समस्या धेरै छन्। मुख्य व्यक्तिहरूलाई विचार, र तिनीहरूलाई समाधान गर्न विधिहरू पाउन।
उदास इन्धन इंजेक्शन समय। चिसो मौसम मा डिजेल इन्जिन को लेट इंजेक्शन सुरु को मामला मा लगभग असम्भव छ। साथै, यो मामला हो भनेर निर्धारण गर्न अक्सर गाह्रो छ। यो निदान आवश्यक हुनेछ।
अर्को जरुरी कारण - ब्याट्री को रिसाव वर्तमान। को गर्मी मा यो यो प्रश्न तुरुन्त समाधान आवश्यक छ, को स्टार्टर को हिउँदमा चलाउन कम ऊर्जा खपत रूपमा सजिलै देखिने हुन सक्छ। सबैभन्दा अक्सर घुमावदार मा समस्या (कतै केही shorted)। यो सबै प्राथमिक दृश्य निरीक्षण मा पाइन्छ। यो जाँच गर्न मनमोहक छ बिजुली बेल्ट , वेयर लागि आवश्यक भएमा कस। त्यसपछि, सम्भवत, त्यसपछि यो सम्भव कुनै पनि समस्या बिना चिसो मौसममा इन्जिन सुरु गर्न हुनेछ।
साधारण समस्या र आफ्नो समाधान
यो ग्यारेज छोड्न आवश्यक हुँदा मोटर चालकहरुलाई, को हिउँदमा सामना र कार सुरु हुनेछ केही समस्या विचार गर्नुहोस्। स्पार्क प्लग डाली गर्न सकिन्छ। यो एकदम अक्सर हुन्छ, र यो भयानक केही, तर काम गर्न कतै जान असम्भाव्य छ। बस देखेको गर्न कसरी स्पार्क को मोमबत्ती सफा गर्न आवश्यक छ। साथै, तिनीहरू केवल परिवर्तन वा दन्किरहेको मा ignited गर्न सक्नुहुन्छ।
यो त एक महिना लागि ग्यारेज र पछिल्लो समय यसलाई छोड्न छ मा कार, यो अझै पनि न्यानो थियो हुन्छ, र ट्यांक तथाकथित "गर्मी" डिजेल इन्धन भरिएको छ। चिसो मा जेली जस्तै हुन्छ, र कार zavedet छैन। समस्या समाधान गर्न, तपाईं "छिटो सुरु" वा जस्तो कुरा रूपमा रासायनिक माल, को प्रयोग गर्न Resort गर्न सक्नुहुन्छ। यो इन्धन सिस्टम Hoses न्यानो पानी गर्मी गर्न सम्भव छ।
तपाईं मेकानिक्स ड्राइभिङ छन् भने एक क्लच पूर्णतया निराश प्रदर्शन गर्न जाडो आवश्यकता मा सुरु गर्नुहोस्। यो सम्भव प्रत्यक्ष स्टार्टर मा लोड कम बनाउँछ। यो पनि समय समयमा त्यहाँ संचित गर्ने condensate देखि निकास पाइप सफा गर्न सिफारिस गरिएको छ, यो पनि एक काम विधि हो।
निस्सन्देह, यो जाडो, यो यसको पूर्व-तयार लागि कार छोड्न उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। यो मोमबत्ती, सिलेंडर सफाई द्वारा गर्न सकिन्छ, र यति मा। एन डिजेल लागि जाँदा, त्यसपछि यो पहिलो प्रयास सुरु गर्न सिफारिस गरिएको छ। स्टार्टर बारेमा 10 सेकेन्ड घुमाउन सक्नुहुन्छ। सेटिङ हुन गर्दैन भने, त्यसपछि तपाईं हुड अन्तर्गत समाधान खोज्न आवश्यक छ।
आफ्नै हातले हेडलाइट्स को पलिश
ओपल vectra बी ( "ओपल vectra बी"): विनिर्देशों र समीक्षा
पत्रकारिता के हो? परिभाषा, पत्रकारिता शैलियों
होटल Mulia Resort नूसा दुआ बाली5* (इन्डोनेशिया): समीक्षा
इलेक्ट्रोनिक चुरोट लागि कैडिलाक star name स्वाद: वर्णन, सीमा, समीक्षा
कसरी मिति मा एक केटी सोध्नु र कसरी व्यवहार गर्ने?
मौसम स्टेशन: प्रकार, उपकरण र उपकरण, निगरानी बाहिर।
Windows को लागि एक सरल सम्पादक एउटा भिडियो कसरी बनाउने
फस्फेट मल: सुविधाहरू बनाउन
Firyubin Nikolai Pavlovich: पार्टी नेता को जीवन र क्यारियर
Krestovsky टापु: सबै को लागि आकर्षण